မကယှယျလှနျခငျ ပွောဖွဈခဲ့တဲ့ Video Call မှာ နောကျဆုံး ဆိုတာသာသိခဲ့ရငျ “အမကေို့ခဈြတယျ” လို့ပွောခဲ့မိမှာပဲ ဆိုတဲ့ Russell – Shwe Likes
သရုပျဆောငျ နဲ့ မျောဒယျ Russell ကတော့ မိနျး ကလေး တိုငျးကွိုကျနှ ဈသကျ အားပေး ကွတဲ့ ပြိုတိုငျး ကွိုကျနှငျး ဆီခိုငျတ ဈယော ကျပါပဲ။ နာမညျကွီး ဆယျလီဘ ရဈတီတ ဈယောကျွ ဖဈပမေယျ့ ဘဝကိုရိုးရှငျး စှာနထေို ငျတတျတဲ့ Russell ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ နိုဝငျဘာလ (၆) ရကျေ န့ကပဲ သူ့ရဲ့မိခ ငျကွီးကို ဆုံးရှုံးခဲ့ ရတာပွဲ ဖဈပါတယျ။
အမတေဈခု သားတဈခု သာရှိတဲ့ Russell ဟာ မိခငျဖွဈသူကှယျလှ နျသှားတာ တဈ လကြျောရှိနေ ပွီဆိုပမေယျ့ နစေ့ဉျနတေို့ငျးသ တိရနလြေ ကျရှိ တာပွဲ ဖဈပါတယျ။
ဒီကနေ့ မှာလညျး Russell က “နောကျဆုံး video call လို့သာ သိခဲ့ရငျ “ ခဈြတယျ မကွေီး “ လို့ပွောခဲ့မိမှာပဲ …. ကြှနျတျောတို့ မွနျမာတှေ က သားအမိ/သား အဖ မောငျနှမခငျြး “ ခဈြတယျ “ ဆိုတဲ့ စကားကို ဘာကွော ငျ့ပွောရမှာ ရှကျနကွေလဲ မသိဘူး …. ကြှနျတျော အပါအဝငျပေါ့ …. ခဈြတ ယျဆိုတဲ့ စကားက သမီးရညျးစားအတှ ကျပဲမှ မဟုတျတာ ….
နှဈလုံးထဲ ဆိုပမေယျ့ အရမျး ကိုနှေးထှေးစတေဲ့ စကားေ လးပါပဲ ….That’s why Never take your parents or your loved ones for granted ….Tell them “ I love You “ while you still can ….Miss you, Maygyi” ဆိုပွီး ပွော လာပါတယျ။
Russell ကတော့ မိခငျကို သတိရတဲ့ အခြိနျတိုငျး သူ့ရဲ့ခံစားခကျြေ တှကို မကွာခဏဆိုသလို ရေးသားရငျး အလှမျွးေ ဖနတောပဲဖွဈ ပါတယျ။ Russell ရဲ့ မမေကေလ ညျး အခုဆိုရငျ အေးခမျြးတဲ့ဘုံ ဘဝကိုရောကျ ရှိနလေော ကျပွီဆိုတာ သခြောပါ တယျ။ Source: Russell ‘s fb
သရုပ်ဆောင် နဲ့ မော်ဒယ် Russell ကတော့ မိန်း ကလေး တိုင်းကြိုက်နှ စ်သက် အားပေး ကြတဲ့ ပျိုတိုင်း ကြိုက်နှင်း ဆီခိုင်တ စ်ယော က်ပါပဲ။ နာမည်ကြီး ဆယ်လီဘ ရစ်တီတ စ်ယောက်ြ ဖစ်ပေမယ့် ဘဝကိုရိုးရှင်း စွာနေထို င်တတ်တဲ့ Russell ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ (၆) ရက်ေ န့ကပဲ သူ့ရဲ့မိခ င်ကြီးကို ဆုံးရှုံးခဲ့ ရတာပြဲ ဖစ်ပါတယ်။
အမေတစ်ခု သားတစ်ခု သာရှိတဲ့ Russell ဟာ မိခင်ဖြစ်သူကွယ်လွ န်သွားတာ တစ် လကျော်ရှိနေ ပြီဆိုပေမယ့် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသ တိရနေလျ က်ရှိ တာပြဲ ဖစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ မှာလည်း Russell က “နောက်ဆုံး video call လို့သာ သိခဲ့ရင် “ ချစ်တယ် မေကြီး “ လို့ပြောခဲ့မိမှာပဲ …. ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ က သားအမိ/သား အဖ မောင်နှမချင်း “ ချစ်တယ် “ ဆိုတဲ့ စကားကို ဘာကြော င့်ပြောရမှာ ရှက်နေကြလဲ မသိဘူး …. ကျွန်တော် အပါအဝင်ပေါ့ …. ချစ်တ ယ်ဆိုတဲ့ စကားက သမီးရည်းစားအတွ က်ပဲမှ မဟုတ်တာ ….
နှစ်လုံးထဲ ဆိုပေမယ့် အရမ်း ကိုနွေးထွေးစေတဲ့ စကားေ လးပါပဲ ….That’s why Never take your parents or your loved ones for granted ….Tell them “ I love You “ while you still can ….Miss you, Maygyi” ဆိုပြီး ပြော လာပါတယ်။
Russell ကတော့ မိခင်ကို သတိရတဲ့ အချိန်တိုင်း သူ့ရဲ့ခံစားချက်ေ တွကို မကြာခဏဆိုသလို ရေးသားရင်း အလွမ်ြးေ ဖနေတာပဲဖြစ် ပါတယ်။ Russell ရဲ့ မေမေကလ ည်း အခုဆိုရင် အေးချမ်းတဲ့ဘုံ ဘဝကိုရောက် ရှိနေလော က်ပြီဆိုတာ သေချာပါ တယ်။ Source: Russell ‘s fb